သင့်ရဲ့ CONNECTION ကိုပုဂ္ဂလိကမဟုတ်ပါဘူး: CHROME ကိုမှားယွင်းနေသည်ဆိုပါကအဘယျသို့ - CHROME ကို GOOGLE - 2019
Google က Chrome မှာ "သင်၏ဆက်သွယ်မှုပုဂ္ဂလိကမဟုတ်ပါဘူး" ဟုအဆိုပါသတင်းစကားကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
Windows ကိုမှားယွင်းမှုတစ်ခု msvcp110.dll generate မည်, ဖိုင်စနစ်ကနေပျောက်သွားမှာ။ ဤသည်အများအပြားအကြောင်းပြချက်များအတွက်ပေါ်ပေါက်မည် OS ကစာကြည့်တိုက်ကိုမမွငျပါဘူးသို့မဟုတ်သူမရိုးရိုးလေးမတည်ရှိပါဘူး။ ကွန်ပျူတာသို့လိုင်စင်မဲ့ဆော့ဖ်ဝဲသို့မဟုတ်ဂိမ်းကို install လိုက်တဲ့အခါဖိုင်တွေ msvcp110.dll အစားထိုးသို့မဟုတ် update များကို download လုပ်နေကြသည်။
msvcp110.dll နှင့်အတူပြဿနာများကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရရန်, သငျသညျအများအပြားရွေးချယ်စရာကြိုးစားနိုင်ပါ။ , အထူးအစီအစဉ်ကိုအသုံးပြု Visual C ++ 2012 အထုပ်ကို download လုပ်ပါ, ဒါမှမဟုတ်အထူးက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အတူဖိုင်တစ်ခုထည့်သွင်းပါ။ ကျွန်တော်တို့ကိုပိုပြီးအသေးစိတ်တစ်ခုချင်းစီကိုဆန်းစစ်ကြပါစို့။
Method ကို 1: DLL-Files.com လိုင်းအစီအစဉ်
အဆိုပါအစီအစဉ်ကို DLL file တွေကိုတစ်ခုဗဟု်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဒေတာဘေ့စရှိပါတယ်။ ဒါဟာ msvcp110.dll မရှိခြင်း၏ပြဿနာအားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီပေးနိုင်သည်။
စာကြည့်တိုက်ကို install လုပ်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်အောက်ပါအဆင့်တွေကိုလုပ်ဆောင်ပါရန်လိုအပ်မည်:
ကော်လံများတွင်ရှာဖွေရေး "msvcp110.dll" ရိုက်ပါ။
ယင်းကိုအသုံးပြုဖို့ "ဖိုင်ကို DLL »အဘို့ရှာပါ။
ထိုအခါဖိုင်အမည်ပေါ်တွင် click လုပ်ပါ။
Done, စနစ်တပ်ဆင် msvcp110.dll ။
အဆိုပါအစီအစဉ်ကို user ကစာကြည့်တိုက်တဲ့နေရာမှာမတူညီတဲ့ဗားရှင်းကို select သတိပေးခံရသည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးအပိုဆောင်းအမြင်ရှိပါတယ်။ ဂိမ်းတိကျတဲ့ဗားရှင်း msvcp110.dll တောင်းလျှင်, သင် program ကိုဤအမျိုးအစားမှ switching ကရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ လိုချင်သောဖိုင်ကိုရွေးဖို့, အောက်ပါပြုပါ:
အထူးအသွင်အပြင်အတွက် client ကို Install လုပ်ပါ။
ဖိုင်ရဲ့သင့်လျော်သော msvcp110.dll ဗားရှင်းကိုရွေးပြီးခလုတ်ကိုကိုသုံးပါ "၏ဗားရှင်းကို Select လုပ်ပါ".
သင်တစ်ဦးအတွေ့အကြုံရှိအသုံးပြုသူ၏ setting နှင့်အတူ window ကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်။ ဒီနေရာတွင်အောက်ပါ parameters တွေကိုချမှတ်နိုင်သည်
msvcp110.dll တပ်ဆင်ရန်လမ်းကြောင်းကို Specify ။
ထိုအခါကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ယခု Install".
စနစ်ကူးယူစာကြည့်တိုက် Done ။
Method ကို 2: Visual Studio 2012 Visual C ++ အထုပ်
Microsoft က Visual C ++ 2012 သင်ကသုံးပြီးတီထွင် applications များ run ဖို့လိုအပ်ပါတယ်သင့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိသမျှသောအစိတ်အပိုင်းများ, တပ်ဆင်ပြီး။ msvcp110.dll နှင့်အတူပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက်, ဒီအထုပ်ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး install ဖို့လုံလောက်တဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုအလိုအလျှောက်စနစ်ဖိုင်တွဲများနှင့်မှတ်ပုံတင်နိုင်ရန်လိုအပ်သောဖိုင်များကိုကော်ပီကူးပါလိမ့်မယ်။ အခြားသူများကအရေးယူထုတ်လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
တရားဝင်ဆိုက်နှင့် Visual Studio 2012 Visual C ++ အထုပ်ကို Download လုပ်ပါ
သင်၏ Windows ဘာသာစကားကိုရွေးချယ်ပါ။
Next ကို, သင်သည်သင်၏အမှုများအတွက်သင့်လျော်သော option ကိုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ သူတို့က2ပူဇော် - 32-bit နဲ့အဘို့တယောက်, ဒုတိယ - 64-bit နဲ့ Windows အတွက်။ သင့်လျော်သည်သူတို့ထဲကအရာထွက်ရှာတွေ့မှအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ကွန်ပျူတာ" right-click နှိပ်ပြီးသွားပါ "Properties ကို"။ သငျသညျဥတုကပြောပါတယ်ရှိရာ OS ကို parameters တွေကိုအတူပြတင်းပေါက်မြင်လိမ့်မည်။
64-bit နဲ့အဘို့အ X86 32-bit နဲ့ system သို့မဟုတ် x64, ကိုရွေးပါ။
စာနယ်ဇင်းများ "Next ကို".
ဒေါင်းလုပ်ပြီးစီးပြီးနောက်, ဒေါင်းလုပ်လုပ် file ကို run ။ သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခု:
Done ယခု msvcp110.dll ဖိုင်စနစ်တပ်ဆင်နှင့်အတူဆက်စပ်အမှားသည်မရှိတော့ပေါ်ပေါက်သင့်ပါတယ်။
ဒါဟာသင်ပြီးသားကို Microsoft Visual C ++ ပြန်လည်ခွဲဝေမှု၏အသစ်တစ်ခုကိုအထုပ် installed ကြလျှင်, သူသည်သင်တို့ကို 2012 နှစ်တွင်တပ်ဆင်အထုပ် start ကိုမပေးနိုငျကွောငျးသတိပြုသင့်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, လိုအပ်ကြောင်းမှတဆင့်ပုံမှန်အတိုင်းလမ်းထဲမှာ, system ထဲကနေအထုပ်ဖယ်ရှားပစ်ရန် "Control Panel ထဲက"သာထို့နောက် 2012 ခုနှစ် version ကို install လုပ်ပါ။
Microsoft Visual C ++ တို့ပြန်လည်ခွဲဝေမှုအမြဲယခင်ဗားရှင်း၏ညီမျှသောအစားထိုးမဟုတျပါဘူး, ဒါကြောင့်တခါတရံတွင်သင်သည်ဟောင်းဗားရှင်းထားရန်ရှိသည်။
Method ကို 3: ပူးတွဲ msvcp110.dll
သင်ရုံဟာ directory က copy, msvcp110.dll သတ်မှတ်ထားနိုင်သည်
ဒါဟာ installation ကိုလမ်းကြောင်းကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်မည်အကြောင်းကိုလည်းသတိပြုသင့်သည်, သငျသညျကို Windows XP, Window 7, Window 8, သို့မဟုတ် Windows 10, ဘယ်လောက်အဘယ်မှာရှိသနည်းစာကြည့်တိုက်ကိုတပ်ဆင်ရန်ရှိပါက, သင်သည်ဤဆောင်းပါးကနေသင်ယူနိုင်ပါတယ်။ ထိုအခါ DLL ကို register နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြားဆောင်းပါးဖတ်ပါ။ အများအားဖြင့်ဖိုင်မှတ်ပုံတင်ရန်မလိုပါသည်ရှိ၏, OS ကို Windows မှာသူ့ဟာသူအလိုအလျောက် mode မှာမ, ဒါပေမယ့်အစွန်းရောက်ကိစ္စများတွင်, ဒီ option ကိုလိုအပ်နိုင်ပါသည်။
ဗီဒီယို Watch: Google Chrome တင မနမစ မငရအငလပနည (စက်တင်ဘာလ 2019).